ZoomInfo: Ukukhawulezisa uMbhobho wakho we-B2B ngeDatha yeNkampani njengeNkonzo (DaaS) | Martech Zone
Ukuba uthengisela amashishini, uyazi ukuba kunzima kangakanani ukufumana iinkampani ezilindelekileyo kwaye ulandelele phantsi abo bathatha izigqibo apho… singasathethi ke ngokuqonda injongo yabo yokuthenga ngokwenene. Ii-superstars zeB2B zezentengiso ezimangalisayo, zifowunela emva kokufowuna kubafowunelwa bangaphakathi nabangaphandle abakhe ubudlelwane nabo ukuze bachonge abantu abafanelekileyo kwiinkampani ezifanelekileyo - ngexesha elifanelekileyo.
ZoomInfo uye wakha ophambili kwihlabathi Idatha njengeNkonzo (I-DaaS) iqonga lokuxhasa isicwangciso sakho sokuya-kwimarike naphi na apho wena okanye abathengi bakho bakhona emhlabeni. Yabo Idatha ye-firmographic Iquka:
Iirekhodi zenkampani ezizigidi ezili-106
Iirekhodi ze-167 zezigidi zoqhagamshelwano
I-140 yezigidi zeedilesi ze-imeyile
Izigidi ezingama-50 zeenombolo zokucofa ngokuthe ngqo
41 million amanani mobile
Iiteknoloji ezingama-31,000 zifakiwe
Olu ayiloluhlu olungaguqukiyo… ngaphezu kwe-100 lezigidi zeerekhodi zoqhagamshelwano zihlaziywa yonke imihla luthungelwano olukhulayo lwabaxhasi bokuzithandela abaqinisekisa okanye bongeza ulwazi olutsha. Ukufunda ngoomatshini (ML) kunye noLungiselelo loLwimi lweNdalo (NLP) zikwasetyenziselwa ukubamba idatha esuka kwimithombo ye-intanethi ye-38 yezigidi zemihla ngemihla - kubandakanywa iiwebhusayithi zenkampani, amanqaku eendaba, iifayili ze-SEC, kunye nokuthunyelwa kwemisebenzi. Kananjalo banabasebenzi abangaphezu kwama-400 abaqinisekisa kwaye baphucule izixhobo zabo zophando kunye neendlela zokuchaneka okwandisiweyo ukuya ngaphezulu kwe-90% ngereyithi yomdlalo wama-99.8%.
Benzisa ZoomInfoiqonga, inkampani yakho ingaphanda, ijolise, kwaye ifikelele awona mathemba angcono e-B2B. Ukugubungela, ukuchaneka, kunye nobunzulu beZoomInfo zibonwa njengezona zibalaseleyo kushishino. Ezi zisombululo ziya kunceda iintengiso zakho kunye namaqela entengiso akhawulezise ukuthengisa ngokunciphisa ixesha lakho lokuvala kunye nokwandisa ingeniso yakho ngokuvala. Iqonga libandakanya:
Intelligence -chaza imakethi yakho, fumana abathengi abafanelekileyo, ulandelele injongo yomthengi, kwaye uhlalutye iminxeba, iintlanganiso, kunye nee-imeyile ukuhlalutya inkqubo yakho yokuphucula.
uthethathethwano -ekulula ukuzisebenzisa usetyenziso lwemveli olulula ukufikelela kunye nokunxibelelana nabathengi kuwo onke amajelo akho abalulekileyo, kubandakanya i-imeyile, ifowuni, kunye nencoko yewebhusayithi.
Uluhlu - ukwandisa imveliso yokuthengisa ngokuvula iinkqubo zemanuwali ezisekelwe kwimisebenzi efanelekileyo yangaphandle kunye nengaphakathi.
Iimpawu zeQonga leZoomInfo zibandakanya
Qhagamshelana kunye noKhangelo lweNkampani -Chaza iimarike, fumana abathengi abafanelekileyo
Injongo yomthengi – Fikelela ekulungeleyo-ukuthenga amathemba
Incoko Intelligence – Hlalutya lonke unxibelelwano
Ubudlelwane Intelligence -Bamba abafowunelwa kunye nonxibelelwano
Idatha-njengeNkonzo – Sebenzisa isicwangciso sedatha esimanyeneyo
Ukuzenzekelayo kwentengiso -Yenza lula ukufikelela kwifowuni kunye ne-imeyile
Incoko yeWebhusayithi – Chonga kwaye ulandele indlela abakhokelayo abafanelekileyo
Intengiso yedijithali -Jonga abaphulaphuli abalungiselelweyo
Workflows – Qalisa ukuya emarikeni
Ukuphuculwa kweNkokeli -Faka idatha ngexesha lokwenyani
Unxibelelaniso -Beka eyona datha ikumgangatho ophezulu kwizicelo ezininzi ezibandakanya iSalesforce, iMS Dynamics, kunye Hubspot.
UBucala beDatha, ukungafihli, kunye nokuThotyelwa
ZoomInfo ithobela ngokupheleleyo ekufumaneni, ekugcinweni nasekugcinweni kwedatha ye-B2B yenkampani:
I-ZoomInfo yi-ISO 27001 eqinisekisiweyo, kwaye sibuthathela ingqalelo ubumfihlo bedata kunye nokhuseleko. Silandela imigaqo-nkqubo engqongqo ukuqinisekisa ukuba idatha esiyiqokelelayo ihlala ihambelana nomthetho wamva nje. Sikwaziqinisekisile ngokwethu kwi-EU-US kunye neSwiss-US Privacy Shield frameworks. Iinkqubo zethu zokugqithiselwa kwedatha zithobela iimfuno ezisuka kwiManyano yaseYurophu, eUnited Kingdom, eSwitzerland, kunye nase-United States.
Ikhowudi yoLuntu yeZoomInfo
IZoomInfo yinkokeli yesoftware yangoku yokuya-kwintengiso, idatha, kunye nobukrelekrele kwiinkampani ezingaphezu kwama-20,000 kwihlabathi liphela.
Qala isilingo sakho sasimahla seZoomInfo
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco am adibeneyo kweli nqaku.
tags: b2bb2b injongo yomthengib2b uhambo lomthengiidatha ye-b2bb2b idatha ehambelanayob2b uphandoIdatha yeteknoloji ye-b2bidatha yeshishiniinjongo yomthengiuhambo lomthengiidatha yenkampaniincoko yobukrelekreleUsukuidatha njengenkonzoukudityaniswa kwedathaukuthengiswa kwedathaidatha ye-firmographichubspotiso 27001ukutyebisa okukhokelayoms Dynamicsidatha yokukhangelaulwalamano lobukrelekreleoomatshini bokuthengisaukuzibandakanya kwintengisoyokuthengisaukuthengisa orchestrationukuthengiswa komsebenziukuthengisaingxoxo yewebhusayithizoominfo
Hey DAN: Ilizwi eliya kwiCRM lingabomeleza njani uBudlelwane bakho boThengiso kwaye uhlale ucocekile
IVoucherify: Qalisa iiNkuthazo ezenzelwe wena ngeSicwangciso samahala seVoucherify